Amamihe dị ukwuu nke ọdịdị a na-ehichapụ dịka ọkachamara dị elu
Wepụ ọdịnaya bụ ọdịnaya anyị wepụtara site na weebụsaịtị ndị ọzọ wee jiri saịtị anyị ma ọ bụ blog. Google, Bing, na Yahoo dabere na ihe ntanye ọdịnaya s na crawlers weebụ gaa na saịtị weebụ dị iche iche. Ngwaọrụ ndị a na-enyere aka na-eto eto na-adabara ma ndị na-eme ihe nkiri na ndị na-abụghị ndị mmemme - роутер беспроводной цена. Ndị nta na ndị buru ibu na-enyocha ọdịnaya mgbe niile ma chekwaa ya na data data. A kọwara uru dị ukwuu nke usoro a n'okpuru:
1. Kwesịrị ekwesị maka azụmahịa:
Yelp, TripAdvisor, Zomato, Business Business Bureau, Amazon, Google, Trustpilot, na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-eji ihe ndị a kpochapụrụ na ya mgbe niile. Ha na-adabere na ndị na-ewe ihe ubi weebụ dị iche iche n'ihi na ha ziri ezi na izi ezi ha. Ụdị dị iche iche na-aga na saịtị mgbasa ozi ọha na eze iji kwalite ngwaahịa na ọrụ ha. Ọ bụrụ na ị wepụ nkọwa ngwaahịa na ihe oyiyi nke netwọk e-azụmahịa na netwọk mgbasa ozi mmekọrịta, ị ga-enwe ohere ọganihu iji zụlite azụmahịa gị. Webmasters na mmemme na-ehichapụkwa profaịlụ LinkedIn ma chekwaa ozi maka ojiji offline.
2. Ọrụ dị iche iche na ngwaahịa:
Ụbọchị ndị a, onye ọ bụla chọrọ ịzụ ngwaahịa na ọrụ n'aka Alibaba, eBay, na Amazon. Dịka onye na-webmaster, ị nwere ike ikpokọta akwụkwọ ndekọ dị iche iche ma nweta ozi bara uru maka onwe gị. Ozugbo a kpochapụrụ ọdịnaya ahụ, ịnwere ike iji nyochaa ngwaahịa, nkọwa ọnụahịa, na ihe oyiyi iji nyochaa. Ọ na-enyere aka melite ogo ngwaahịa na ọrụ gị. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ n'ụlọnga na-arụ ọrụ ma na-achọ ịchọta ọnụọgụ ahịa nke ndị ahịa, ị ga-enwerịrị ọdịnaya site na saịtị dị iche iche wee tụnyere ihe ọnụahịa nke ụgbọala. Dịka ọmụmaatụ, Uber na Careem na-adabere n'inweta ọdịnaya iji mee ka azụmahịa ha dịkwuo elu. Ha na-enye nkọwa gbasara ndị ọkwọ ụgbọala ha, ụgbọ ala na ego ịkọ. Ụlọ ọrụ ndị a na-ahụkarị atụmanya anyị site na ịnye ọrụ ndị a pụrụ ịdabere na ha.
3. Nchịkọta ọdịnaya na nyocha:
Ụmụ akwụkwọ, ndị ọkà mmụta sayensị, ndị ọkà mmụta sayensị, ndị dọkịta na ndị na-agụ kpakpando chọrọ iwepụ ọdịnaya iji mee ka ọrụ ha rụọ. Ha na-anakọta ozi gbasara isiokwu ndị sitere na ọtụtụ puku ebe nrụọrụ weebụ. A na-ebipụta ọtụtụ nde isiokwu kwa ụbọchị, ha na-enyekwa aka gbasaa ọtụtụ nnyocha. Ị nwere ike ịmechapụ ọchụchọ gị ma chekwaa oge na ego gị mgbe ị na-arụ ọrụ gị.
4. Atụmatụ ego kwesịrị ekwesị:
A na-ewepụ ọdịnaya maka ịhazi atụmatụ ego. Ị nwere ike wepụ data banyere mgbanwe ngwaahịa, ihe onwunwe ego, ọnọdụ ndị dị ugbu a, na atụmanya ụlọ ọrụ. Bubata. Onyonyo na Octoparse nyere aka na-anakọta data bara uru sitere na intaneti ma wepụ ya dị ka ihe gbasara gị.
5. Ịzụta na ịgbazite:
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta ma ọ bụ gbazite ihe, ịkwesịrị iwepụ ọdịnaya ma ghọta uru na ụlọ ahịa nke ụlọ akụ ahụ.Ị nwere ike ịmepụta dataseti ngwa ngwa, dozie ndepụta nke ndị mmadụ, ma nata nkọwa gbasara otu ihe onwunwe. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụ ihe, ị ga-anakọta na data nchịkọta maka ụlọ na obodo.
A ngwá ọrụ na-ewepụta data bara uru site na weebụsaịtị dị iche iche, na-edozi njehie na edemede, ma rụọ ọrụ dịgasị iche iche. Webmasters na programmers gosipụtara ndepụta RSS, na Twitter na-enyefe na weebụsaịtị ha. Ọ bụ ụzọ dị mma isi tinyekwuo ndị na-agụ akwụkwọ, ma igosipụta oke ozi nwere ike imebi ọkwa gị. Ya mere, ị ga-egosipụta na ọ bara uru na nke ziri ezi.